चितवनमा धेरै कार्यकर्ता भेला गरेपछि केपी ओलीलाई आपत ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com चितवनमा धेरै कार्यकर्ता भेला गरेपछि केपी ओलीलाई आपत ! - खबर प्रवाह
पार्टीको १०औं महाधिवेशनका लागि देशभरबाट धेरै कार्यकर्ता भेला गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आपत परेको छ ।
धेरै कार्यकर्ताको भीडका कारण अध्यक्ष ओली उद्घाटनस्थलबाट होटल फर्कने क्रममा ट्राफिक जाममा फसेका छन् ।
राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटनस्थल नारायणी नदी किनारबाट होटल फर्कने क्रममा ओली टिकौलीमा जाममा परेका हुन् ।
अध्यक्ष ओली चढेको गाडी जाममा फसेपछि जाम खुलाउन धौंधौं परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख तथा प्रहरी निरीक्षक भगवानराज थापाले बताएका छन् ।
आज शुक्रवार दिनभरजसो जाम भएपछि कतिपय एमाले कार्यकर्ताहरु हिँडेर महाधिवेशनको उद्घाटनस्थल नारायणी नदी किनार पुगेका हुन् । टिकौली जंगल नारायणी नदी किनारबाट करीब ४ किलोमिटर पूर्वतर्फ रहेको छ ।
महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट आएका एमाले नेता कार्यकर्ताहरू एकैसाथ उद्घाटनस्थलबाट बाहिरिएका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ ।